हामी अब जनताका वीचमा हिँड्यौं : प्रचण्ड
१८ माघ, काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब आफूहरु जनताका वीचमा हिँडेको बताएका छन् । संविधानसभामा बहस गर्ने ठाउँ सत्तापक्षले नराखेका कारण अब बहस गर्ने ठाउँ सडक नै भएको उनले बताएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार अपरान्ह आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने-‘अब हामी आजैका मितिदेखि जनताका वीचमा...
पाटन दरबार क्षेत्रमा चित्र कोर्दै कलाकारहरु । तस्वीर : विकास श्रेष्ठ
ओलीले त्यस्तो नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो : नेम्वाङ
तीता कुरा नगर्न सभाध्यक्षको सुझाव १८ माघ, काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । फाइल फोटो विगतमा संसद अवरोध खुलाउँदा...
संविधानसभा नछाड्ने, वार्ताको ढोका खुल्लै राख्ने १८ माघ, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । सदभावना पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको...
राप्रपा नेपालद्वारा प्रश्नावली समिति बहिष्कार
जनमत संग्रहको माग अस्वीकृत १८, माघ काठमाडौं । संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका बारेमा जनमत संग्रहमा जाने प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि राप्रपा नेपालले प्रश्नावली प्रस्ताव समिति बहिस्कार गरेको छ...
१८ माघ, काठमाडौँ । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले अब बन्ने संविधानमा कर्णालीलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । मञ्चले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका...
• ग्यास उद्योगी भन्छन्-२ महिना पछि सहज
• एमाओवादी मोर्चा अवसरवादीको गुट : डा. महत
• पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र विद्याबीच ‘भीआइपी रुममा’ भेटवार्ता
• केपी ओलीले काग चिन्न मद्दत गरे : डा. बाबुराम
• नवलपरासीमा होटल व्यवसायीको हत्या
सरकार सहमतिको पक्षमा : विमलेन्द्र निधि
१८ माघ, पोखरा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत ३० दलीय मोर्चाले गर्ने आन्दोलनले संविधान निर्माणमा बाधा पुग्ने...
• संविधानसभाबाट सामुहिक राजीनामा दिने प्रचण्डको प्रस्ताव
• देउवाले भने-एमाओवादी आन्दोलनलाई सहयोग नगर्नुस्
• वार्तामा बस्न तयार छौं : नारायणकाजी
• विप्लवको नजरमा लोकमानसिंह ‘सबैभन्दा भ्रष्ट’
बिजनेस छुटमा मोबाइल किन्ने हो ? भृकुटीमण्डप जानुहोस्
१८ माघ, काठमाडौं । यदि तपाई मोबाइल खरिद गर्�